Sheekh Mukhtaar Roobow oo ay xaaladu ku adagtahay iyo Odayaasha reerkiisa oo amar dul dhigay |
Sheekh Mukhtaar Roobow oo ay xaaladu ku adagtahay iyo Odayaasha reerkiisa oo amar dul dhigay
Wararka laga helaayo Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in Saacadihii lasoo dhaafay Magaaladaasi ay ka jireen Xaalado Cakiran oo salka ku haaya Isbur-bursi u dhexeeya Hogaamiye Mukhtaar Roobow iyo Maleeshiyo kale oo halkaasi ku sugan.
Sheekh Mukhtaar Roobow oo ay dhawaan kala irdhooben Hoggaamiyaha Maleeshiyadda Alshabaab Axmed Godane ayaa waxa uu iminka gaaray Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool, iyadoona Xaaladda Magaalladaasi ay gashay mar xalad ka duwan marxaladihii ay ku jiri jirtay.
Sidoo kale Abuu Mansuur iyo Ciidamo daacad u ah oo kasoo baxsaday dhinaca Magaalada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa Gaaray Xudur, balse Odiyaasha deegaankaasi oo qaarkood ay isku heyb hoose yihiin Sheekh Mukhtaar, ayaa soo jeediyay in Wadaadka iyo Ciidamadiisa Magaalada ka baxaan, kadib cabsi ku aadan in weeraro lagu soo qaado halkaasi.
Xudur ayaa waxaa dhowr mar isku fara saaray Ciiddamo daacad u ahaa Mukhtaar Roobow iyo Axmed Godane, waxaana is farasaarkaasi ku dhintay dad Rayid ah, waxa uuna iminka Imaanshaha Mukhtaar Roobow iyo Ciiddamadiisu kusoo beegmeysa Khilaafyo ba’an ay u dhexeeyaan Maleeshiyadda Alshabaab.
dhanka kale Wararku waxa ay iminka sheegayaan in Abuu Mansuur uu ka hor imaaday soo jeedinta Odiyaasha ee ahaa in ay ka baxaan Magaalada ayaa ugu danbeyn la xaliyay, iyadoona Abuu Mansuur isaga baxay Magaaladaasi, sida ay sheegayaan ilo wareed lagu kalsoon-yahay, iyadoona uu gaaray tuulo duleedka ka ah Magaalada Xudur, halkaasi oo ay heegan buuxa ay ka galeen Ciidamada u daacada ah Mukhtaar Roobow.
Maleeshiyadda Mukhtaar Roobow ayaa waxa ay ugaarsi ugu jiraan Ciiddamadda uu Hoggaamiyo Axmed Godane oo iyagu isku afgaranla Colaado ka dhashay dhanka faafinta Jihaadka, waxaana isku fara goosanaayo labada Maleeshiyo.
Ugu dambeyntii Xaalada Mukhtaar roobow ayaa waxa ay iminka u muuqata Xaaladii soo wajahday Sheikh Xassan Daahir Aweys, iyadoona la garaneynin wadada uu Roobow raaci doono wallow wararka ay sheegayaan inuu xiriiro la sameynaayo Dowladda Somalia.